Hargeysa: Nin Diyaarad Ka Sameeyay Hoteel Oo Ka Waramay Wakhtigii Ay Fikradaasi Ku Dhalatay | Berberatoday.com
Hargeysa: Nin Diyaarad Ka Sameeyay Hoteel Oo Ka Waramay Wakhtigii Ay Fikradaasi Ku Dhalatay
Weligaa ma ku fekertay in dayaarad weyn oo nooca rakaabka ah laga dhigi karo makhaayad cunto wanaagsan leh?
Hargeysa(Berberatoday.com)-Fikradaas waxaa magaalada Hargeysa la yimid Khadar Xasan Daa’uud oo ka mid ah dadka qurbaha ka soo laabtay.
Dayaaradaas oo beri ahaan jirtay mid ka shaqaysa Hargeysa iyo waddamada kale ee gobolka, ayuu Khadar sheegay in fikraddan ay ku dhalatay “markii ay dayaaraddu cilladowday”, isna uu London ku lahaa xafiis tikidhada gooya oo uu axwaasha diyaaraddan la socday.
“London markaannu joognay maraakiib ayaa makhaayado laga dhigi jiray, maadaama aan taas soo arkay, waxaan ku fekeray ‘dayaaradii aad tikidhada u goyn jirtay maad makhaayad ka dhigtid’” ayuu yidhi Khadar.
Wuxuu intaa ku daray Khadar in uu ku sameeyo makhaayadda raashin u badan kan “waddaniga” loo yaqaanno, laakinse noocyada kale ee cuntooyinkana ayan meesha ka madhnayn.
Saynab Muuse oo makhaayadaas joogtay, caruurna wadatay waxay tidhi “waa markii labaad ee aan la kulmo dayaarad makhaayad laga dhigay. Addis Ababa ayaan markii hore ku arkay, markanna waanigan dhex fadhiya Hargeysa, waxayna ka mid tahay horumarka uu waddanku gaadhayo”.
“Waxaan doonayaa in ay ogaadaan qurbajoogta in dalka la maalgashan karo” ayuu Khadar yidhi